Muxuu yahay ciwaanka la cambaareeyay ee uu Washington Post ka qoray Al-Baqdaadi? - BBC News Somali
Wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa canbaareyn weyn kala kulmay ciwaan uu u yeelay maqaal uu maalintii Aaxadda ahayd ka qoray hoggaamiyihii la dilay ee kooxda dowladda Islaamiga ah(ISIL) Abu Bakar Al-Baqdaadi.
Ciwaanka qormada wargeyska ayaa lagu sheegay in Baqdaadi uu ahaa "Sheekh diinta ku adag", waxaana qeexitaankaas loo arkay mid aan loo dulqaadan karin.
Goor dambe ayuu wargeysku baddalay ciwaanka sheekadaas, wuxuuna ka dhigay "Hoggaamiye xagjir ah".
Guddoomiye ku xigeenka dhinaca isgaarsiinta ee hay'addan warbaahineed, Kristine Coratti Kelly ayaa tidhi "Marnaba ma aysan ahayn in ciwaankaas loo qoro qaabkaas haddana si deg deg ah ayaan u baddalnay".
Baqdaadi ayaa la sheegay inuu isku qarxiyay garan walxaha qarxa ay ku rakibnaayeen ka dib markii goobtii uu ku sugnaa ay weerar gaadmo ah ku qaadeen ciidamada khaaska ah ee Mareykanka.
Geeridiisa waxaa Axaddii ku dhawaaqay madaxweyne Donald Trump, oo khudbad qaran ka jeediyay telefishinka.
Ciwaanka Washington Post ayaa markii ugu horreysay Al-Baqdaadi loogu tilmaamay "argagixiyihii ugu weynaa adduunka", ka hor inta aan loo baddalin "Sheekh diinta ku adag oo madax u ahaa kooxda Dowladda Islaamiga ah".
Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa wargeyska ku maadeystay, waxayna ku dhaliileen ciwaankaas oo ay ku tilmaameen "khalad".
Dad kale oo badan ayaa baraha bulshada ku faafiyay ciwaanno ay uga dan lahaayeen maad, kuwaasoo ay u ekeysiinayeen qaabka loo dhigay ciwaanka wargeyska, iyagoo ka hadlayay hoggaamiyeyaal kale iyo dad aan adduunka laga jecleyn.
Hooggaamiyeyaasha tusaalaha loo soo qaatay waxaa ka mid ahaa Adolf Hitler, oo madax ka ahaan jiray maamulkii Nazi-ga ee jarmalka ka jiray.
Washington Post ayaa ugu dambeyn ciwaanka uu u yeelay qormada Abu Bakar Al-Baqdaadi ka dhigay: "Abu Bakar Al-Baqdaadi, hoggaamiyihii xagjirka ahaa ee kooxda Dowladda Islaamiga ah ayaa geeriyooday isagoo 48 jir ah".